“पार्टीहरूमा र देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्छ !” -निगम हुमागाईँ, अध्यक्ष नागरिक समुह - Media Chok
“पार्टीहरूमा र देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्छ !” -निगम हुमागाईँ, अध्यक्ष नागरिक समुह
२०७७ भाद्र १६, मंगलबार मा प्रकाशित ७ महिना अघि
१३११ पाठक संख्या
निगम हुमागाईँको जन्म पिता मदन हुमागाईँ र माता सम्झना हुमागाईँको कोखबाट नमोबुद्ध नगरपालिका काभ्रेपलाञ्चोकमा भएको हो । सानै उमेर देखि अध्ययनशिल, मेहिनती र सहयोगि रहनुभएका हुमागाईँले जनक माध्यमिक विद्यालय भकुण्डेबेशी बाट माध्यमिक तह सम्मको र उच्च शिक्षा त्रिभुबन बिश्व विद्यालयबाट राजनिती शास्त्रमा स्नातकोत्तर सम्मको अध्ययन पुरा गर्नुभएको छ । जिल्ला बाल क्लब संजाल काभ्रेको अध्यक्ष चिल्ड्रेन ह्युमन राइट्स नेपालको अध्यक्ष हुँदै वि.सं.२०७० साल देखी नागरिक समुहको अध्यक्षको रुपमा काम गरिरहनु भएको छ । कृषि लगायत बिभिन्न व्यबसायीक क्षेत्रमा समेत आबद्ध रहनु भएको उहाँ स्वाभिमान सहितको राष्ट्रिय समृद्धि निर्माणका लागि भ्रष्टचार नियन्त्रण सुशासन, प्रत्यक्ष जननिर्बाचित कार्यकारी प्रमुख र प्रत्यक्ष निर्बाचित पार्टी प्रमुखका लागि क्याम्पियन समेत चलाउँदै आउनु भएको छ । देशलाई समृद्धि र विकासको सहि मार्गमा डोहोर्याउन निरन्तर दबाब दिँदै आउनुभएका जाज्वल्यमान युवा अभियान्ता हुमागाई सँग कोरोना भाइरस महामारी र देश विकासमा युवाको भुमिकाका बिषयमा आधारित रहि पत्रकार सरोज सापकोटासँग गरिएको कुराकानी :
कोरोना भाइरस कोभिड १९ को महामारीको समयमा कसरी समय बिताइरहनु भएको छ ?
घरमै बसिरहेको छु । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति, विकासका मोडलहरु लगायतका विभिन्न पुस्तकहरु पढिरहेको छु । विश्वका विभिन्न देशका चर्चित नेताहरू, कलाकारहरु, साहित्यकारहरु, वैज्ञानिकहरु, उद्योगपतिहरु, धर्मगुरुहरुका भाषणहरु, जिवनीहरु युट्युबमा हेरिरहेको छु । अनलाइन कक्षाहरु लिइरहेको छु । यो समयलाई सकेसम्म रचनात्मक बनाउने प्रयास गरिरहेको छु ।
नागरिक समुहले के–कस्ता कामहरु गरिरहेको छ ?
हाम्रो काम भनेको सरकार राज्यका विभिन्न निकाय लगायत नागरिकको जनजिविका सँग सम्बन्धित कुराहरूमा आवाज उठाउने हो । राम्रा कामहरुमा सहयोग गर्ने हो भने, नराम्रा कामहरुमा त्यसको विरोध गर्ने र सकेसम्म नराम्रो काम हुन नदिन आवाज उठाउने भएर गएको पाइएमा कानुनी कानुनी कार्वाहीको दायरामा ल्याउन पहल गर्ने हो । संविधान निर्माणको लागि राजनीतिक दलहरुलाई सकारात्मक दवाव दिने देखि हाल भइरहेको भ्रस्टाचार विरुद्धमा नागरिक समुहले शसक्त आवाज उठाइरहेको छ । स्रोत र साधनहरु को अभाव लगायत अन्य कारणले गर्नुपर्ने धेरै काम गर्न सकिएको छैन तर आफ्नो तर्फबाट हामिले सक्दो प्रयासहरु गरिरहेका छौँ । अहिले कोभिड १९ को महामारीले उत्पन्न भएका गरिबी, किसान, श्रमिक, मजदुर लगायत निम्नवर्गका जनताको दैनिक जनजीवनको समस्या देखि स्वास्थ्यकर्मी, उद्ध्योगी, व्यापारीहरु सम्मका समस्या समाधानका लागि सरकारलाई दवाव दिइरहेका छौँ । जनस्वास्थ्यमा समेत खेलवाड गरी औषधी खरिद प्रकरण देखी, चार्टड फ्लाइटसम्म भएका भ्रष्टाचारका विरुद्धमा आवाजहरु उठाइरहेका छौँ ।
कोभिड १९ रोकथामका लागि युवाहरूको भुमिका के रहन सक्छ ?
यो एउटा महामारी हो । यसको अन्त्य को लागी विश्वभरका वैज्ञानिकहरु लागिरहनु भएको छ । अहिले युवाले यसबाट आफुपनी बच्ने र अरुलाईपनि बच्न सचेत गराउने हो । घरमै बस्ने, भिड्भाड नगर्ने र गर्न नदिने, मास्क सेनिटाइजर का साथै आवश्यकता अनुसार पिपिइको प्रयोग गर्ने, त्यसैगरी यो लकडाउनमा आत्महत्याका घटनाहरु धेरै बढेका कारण खाली समयलाई रचनात्मक कामहरूमा प्रयोग गर्ने, आफुपनी निरास नहुने र अरुलाइ पनि हुन नदिने गर्नुपर्छ युवाहरुले ।
कोभिड १९ को रोकथाम र न्यूनीकरणका लागि अहोरात्र लडिरहनु भएका स्वास्थ्यकर्मीहरु लाई के भन्नुहुन्छ ?
अहिले हाम्रो लागी इश्वर भनेका नै स्वास्थ्यकर्मीहरु हुन् भने, मन्दिर अस्पताल हो । जो कोहिलाई पर्दा औषधोपचार गर्ने स्वास्थ्यकर्मी ज्युहरुले हो । आफ्नो घर र परिवार नभनी अहोरात्र अग्रमोर्चामा, आफ्नो ज्यानको बाजि लगाएर खटिरहनु भएका डाक्टर, नर्स, एच.ए, अस्पतालका कर्मचारी एम्बुलेन्स चालक, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी लगायत सम्पुर्ण स्वास्थ्यकर्मीज्युहरु भगवान हुनुहुन्छ । उहाँहरु प्रती नमन र उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
पछिल्लो समयको सरकारको काम कस्तो लागिरहेको छ ?
लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने र संविधान संसोधन गराउने साहास यो सरकारले गर्यो । म उक्त कारणले त्यसको प्रसंशागर्न चाहन्छु तर अन्य कुराहरूमा सरकारको कामगराइ संतोषजनक छैन! मन्त्रीहरु भ्रस्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेका छन्, विचौलियाहरु हावी भएका छन्, सम्माननिय प्रधानमन्त्रीज्युको अस्वस्थताका फाइदा लगत तत्वहरुले लिएका छन् । जुन आशा र उमंगका साथ जनताले बहुमतक दिएर पठाए तर नेकपाको आफ्नै भागबन्डाको आन्तरिक किचलोमा सरकार अल्मलिएको जस्तो देखिन्छ। शसक्त प्रतिपक्षको अभाव भयो । प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसपनि आफ्नै गुरगत स्वार्थबाट माथी उठ्न सकेन, जुन मुलुकको लागि दुर्भाग्य हो ।
अर्को मुल समस्या राजनीतिक पार्टीहरुमा छ । पार्टीहरुमा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा छ, गुटैगुट छन् । अनि विचौलियाहरु पार्टीमा हावी छन् । केन्द्रदेखि गाउँसम्म प्राय सबै पार्टीमा सिमित स्वार्थ बोकेका व्यक्तिहरुको कब्जामा परेको छ । लाखौं परिवर्तन, विकास र समृद्धि चाहने कार्यकर्ता केही गर्न सकिरहेका छैनन् । अन्य थुप्रै समस्याहरु पनि छन्, भागबन्डाको आधारमा संवैधानिक नियुक्तिहरु भएका छन् । कर्मचारीमा, प्रहरीमा, न्यायपालिकामा सबैतिर राजनीति छ अनि मुलुक कसरी बन्छ त ? यहाँ त लोकतन्त्र, गणतन्त्र र समाजबादको नाममा, लुटतन्त्र हावी भयो !
समस्याको समाधान के हो त ?
समस्याको समाधान छ । पहिलो नम्बरमा, प्रत्येक पार्टीका क्रियाशिल र संगठित सदस्यहरुले प्रत्यक्ष मतदान गरेर जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रिय नेतृत्व छान्न पाउनुपर्छ । यसप्रकारको व्यवस्थाले सिमित व्यक्तिहरुको कब्जाबाट पार्टीहरु अन्य कार्यकर्ताको पहुँचमा आइपुग्छन् । यसले प्रत्यक्ष निर्वाचित नेतृत्व जन्मन्छ । अर्को निर्वाचन प्रणाली बदलौँ । प्रत्यक्ष जननिर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्थामा जाऔं ! विज्ञहरुको मन्त्रीमण्डल बनाउने, संसदको अधिकार नितिरनिर्माण गर्न मात्रै दिने । बजेट लगायत अन्य अहिले संसदका अधिकार पुरौती गर्ने । संवैधानिक अंगहरुमा भएका राजनीतिक नियुक्तिहरु खारेज गर्ने । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण का लागि शक्तिशाली आयोग बनाउने! कठोर कानुन बनाइ, प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्ने ! आशा गर्ने ठाउँहरु धेरै छन् सेना, प्रहरी, कर्मचारी तहका बुझेका देशभक्तहरुलाई विना पुर्वाग्रह कार्यगर्न दिऔं । कृषि, पर्यटन, जलविद्युत, जडिबुटी, खानी, खनिज, रत्न र पुर्वाधार निर्माणमा मुलुकलाई अगाडि बढाऔं त ५ वर्षमा नेपालको स्वरुप नै अर्को बन्छ ।
हामी सबैको सपना भनेको स्वाभिमान सहितको समृद्ध नेपाल हो । त्यसैले सबै पार्टीहरु, नेताहरू, सरकार, कर्मचारी, जनता सबै जिम्मेवार बनुन् र आ—आफ्नो कर्तव्यहरु इमानदारी पूर्वक निर्वाह गरुँन् । अहिले कोभिड १९ को प्रकोपले विदेशमा थुप्रै नेपालीहरु अलपत्र पर्नुभएको छ, काम छुटेको छ, वस्न र खान समस्या छ । नेपालमैपनि धेरै समस्याहरु छन्, सरकार जिम्मेवार र इमानदार भएर प्रस्तुत होस् । यस महामारी विरुद्ध सबै नेपालीहरु एक्यवद्ध भएर एकले अर्कालाई सहयोग गर्नुपर्छ । अन्त्यमा मेरो विचारहरु राख्ने मौका दिनुभएकोमा यहाँलाई र यहाँको लोकप्रिय मिडियाको समस्त टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद् !
काभेबाट प्रकाशित हाम्रो इन्द्रावती साप्ताहिकबाट साभार
पाँचखाल नगर : अब्बल कृषि नीति, मदिरा नियमन तथा व्यवस्थापन
च्याउ खेतिले दिलाएको सफलता
कोभिड–१९ बारे फरक–फरक निर्णयले नागरिक मर्कामा